Eriri belt bụ isi akụkụ nke belt ebu. A na-ejikarị ya eme njem maka nnukwu njem na-aga n'ihu na coal, Ngwuputa, nkà mmụta banyere ígwè, kemịkalụ, ihe owuwu na mpaghara njem. A na-ekewa ihe ndị a ga-ebuba n'ime blọk, ntụ ntụ, peshị na iberibe. Ihe wdg The ebu ebu bụ tumadi ekewet nke atọ n'akụkụ: kpuchie ihe onwunwe, ekpuchi oyi akwa na bottoming ihe, nke ekpuchi oyi akwa na kpuchie oyi akwa bụ isi akụkụ na-ekpebi ya arụmọrụ.
Dika ihe di iche iche eji eji ihe nkpuchi, enwere ike kewaa ya na uzo abuo: akwa ebu ibu na akwa oku. Akara ndị na-ebu ibu na-eji roba (gụnyere roba okike na roba sịntetik) dị ka ihe akụrụngwa bụ isi, ya mere a na-akpọkwa ha eriri ebu ebu, a na-etinyekwa ihe ha n'ọrụ na ngalaba nke nnukwu ụlọ ọrụ na ihe owuwu. Dị ka ojiji dị iche iche si dị, eriri roba nwere ike kee nkewa n'ime eriri nnyefe na eriri ebu. A na-eji nke mbụ eme ihe maka ịnyefe igwe, a na-ejikwa ihe ndị bụ isi maka ụlọ ọrụ na-achọ nnyefe dịka ụgbọ ala na ígwè ọrụ ugbo; a na-eji nke ikpeazụ ahụ eme njem maka ihe njem, ihe a na-achọkarị bụ na ebe a na-egwupụta kol, ise ndị isi nke nchara, ọdụ ụgbọ mmiri, ike na simenti. Belt ebu ebu ebu tumadi na-eji polima ihe, nke na-bụ-eji na ọkụ ulo oru ubi dị ka nri na ngwá electronic.
Industrylọ ọrụ na-ebu eriri roba nwere ogologo akụkọ ihe mere eme mmepe, teknụzụ tozuru etozu, yana ịnye akụrụngwa yana usoro nchekwa gburugburu ebe obibi siri ike nke mba ndị mepere emepe. Ka ọ dị ugbu a, mpaghara ndị ọ na-emepụta bụ mba ndị ka na-emepe emepe. China bụ onye na-ebu belt na-ebu roba kasị ukwuu n'ụwa. obodo.
N'oge a, ụlọ ọrụ na-ebu eriri ụwa na-ebuwanye ibufe ya na mba ndị na-emepe emepe.
China bu isi mba ibido inyefe ulo oru belt na ebu ndi mba ozo. Isi ihe kpatara ya bu: ugwo mmeputa nke ulo di obere ala kariri mba ndi mepere emepe; China abụrụla onye na-ebu ngwa ahịa na-ebu belt nke ụwa na ahịa oriri, na ọnụ ọgụgụ ahịa ahịa ka na-ebute ụzọ nke ụwa. Convelọ ọrụ na-ebu eriri ụlọ na-ebugharị Na mmepe ngwa ngwa, ụfọdụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ enweela ike ịmịpụta ngwaahịa nwere arụmọrụ na nkọwapụta ruru mba dị elu, wee nwee ikike ibugharị ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
China, Brazil na mba ndị ọzọ mepere emepe nọ n'usoro ime obodo na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ọganihu ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ ha dị arọ na nke kemịkal enyewo ahịa na-agbasa ngwa ngwa maka ụlọ ọrụ na-ebu belt ma dọta ọtụtụ ụlọ ọrụ ịbanye na ụlọ ọrụ na-ebu belt. Njirimara bụ isi nke ahịa belt na-ebu ahịa na mba ndị mepere emepe ọhụrụ bụ uto ahịa ngwa ngwa, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe, na ịchekwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị ala. Ka ọ dị ugbu a, mba ndị mepere emepe abụrụla ndị na - emepụta ngwa ahịa na ndị na - azụ ahịa nke eriri ebu na ụwa. N'ime ha, China abụrụla onye na-emepụta ngwa ahịa kachasị ukwuu n'ụwa na onye na-azụ ahịa, na-ewepụta ihe ruru otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ngụpụta zuru ụwa ọnụ.
Mwepụta nke eriri ebu ebu enyela nnukwu nkwado na mmepụta ụlọ ọrụ ma kwalite mmepe nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na oke. Onye obula kwesiri ima na China bu obodo nwere otutu ihe a choro maka eriri ebufe, ya mere obodo anyi bu kwa obodo buru ibu na mmeputa eriri ebu.